नतालिया Bestemyanova: खेल जीवनी। आंकडा स्केटिङ
खेल र फिटनेस, ट्रयाक र क्षेत्र
"एक महिला कमजोर हुनु पर्छ, र म यसलाई उठयो सक्दैन", - तरिका, हँसिलो, नतालिया Bestemyanova बताए। तर जो आनन्दित पारिवारिक जीवनको आनन्द गर्ने, उनको र कमजोर जब बलियो मानिस हुन। नतालिया पति - ठूलो-नाम skater र खेल को Merited मास्टर र अब कोच, र निर्देशक इगोर Bobrin बरफ शो। तिनीहरूले 1983 मा फिर्ता विवाह गरेका थिए। तर स्पष्ट शान्त - यो Bestemyanova बारेमा छ। 55 मा उनले फेरि नयाँ हाइट्स तूफान थियो र सुस्त नै परित्याग छैन। नतालिया एक कोच रूपमा मांग मा, सक्रिय आंकडा स्केटिङ बारेमा टेलिभिजन परियोजनामा, दान काममा संलग्न संलग्न र आफ्नो संयुक्त परियोजना "बरफ लघु को थिएटर" मा उनको पति मद्दत गर्छ छ। तर उनको काँध भन्दा पहिले नै dizzying क्यारियर छ। नतालिया Bestemyanova - skater, 1988 मा ओलम्पिक च्याम्पियन, विश्व र युरोप को च्याम्पियन बारम्बार।
कसरी स्वभावका चरित्र?
एउटा सानो कालो र सेतो स्क्रिन अगाडि केटी बस्छन। एक डूब र आनन्द त्यो बरफ जस्तै देखिन्छ संग जादुई Lyudmila Belousova र ओलेग Protopopov जोडी हाल्छ। को फ्लिकरिङ स्क्रिन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ मार्फत कसरी सजिलै बरफ स्केट कटौती - Belousov यदि flutters। र संगीत, र ताली र दृश्य पछि टिप्पणीकारले जोसिला कैफियत संग सबै यो। यस्तो प्रेम आंकडा स्केटिङ केटी नतालिया Bestemyanova सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ।
तर केही बचा सक्छ गरिएका छन्, र खतरा स्केटिङ को सपना र सपना बाँकी छन्।4वर्ष मा सानो Natasha आफ्नो खुट्टा मा एउटा सञ्चालनको थियो। रूपमा आज पहिचान Bestemyanova Trifling, सरल सञ्चालन। तथापि, मनोवैज्ञानिक डर रह्यो, यो संचालित खुट्टा मा हिड्ने भर गर्न डरलाग्दो थियो। र त, उनको विश्वास को कमी हटाउन मदत, डाक्टर खेल गर्न सल्लाह।
खैर, तपाईं कहाँ केटी दिन सक्छ? निस्सन्देह, आंकडा स्केटिङ मा! त्यसैले आमाबाबुले Natasha निर्णय गरे। नृत्य, मुद्रा, शास्त्रीय संगीत - छोटो, केही pluses! साथै, सोभियत संघ मा खेल को लोकप्रियता गति पाउनु भएको छ। त्यसैले,5वर्ष मा Bestemyanova स्केट्स मा उभिए।
प्रशिक्षण दिन मा तान्नुभयो। नतालिया उनको दाँत gritted र वाचा - कम्तिमा Lyudmila Belousova लागि बरफ मा खडा!
साधारण सोभियत परिवार
Natasha आमाबाबुले आंकडा स्केटिङ गर्न केही भएको थियो। यो सामान्य थियो, तर यो हुनत बरु दुबला, समृद्ध र सुखी परिवार छ। आमा नतालिया Bestemyanova एक अनाथालय हुर्केका र युद्धको भयानक गए। तर यो सौन्दर्य र artistry लागि जन्मजात प्रेम भविष्य च्याम्पियन आमा हो। नतालिया को पिता ईन्जिनियरिङ् विज्ञान सिकाउनुभयो र थियोसिस बचाव।
परिवार Bestemyanova छोराछोरीलाई ठूलो ध्यान गरिएको थियो। नतालिया को आमा, छोरी र छोरा सबै आफ्नो समय बिताइरहेका साझेदारी र तिनीहरूलाई जीवनका कुनै पनि प्रश्न को समाधान गर्न मदत, काम गरेन।
जोडी एकल स्केटिङ देखि
नतालिया Bestemyanova 15 वर्ष संग Eduard Pliner को नेतृत्व अन्तर्गत स्केटिङ थाले। त्यहाँ खेल मा राम्रो-योग्य उपलब्धिहरू थिए। को skater-एकल skater रूपमा नतालिया जूनियर राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप जित्यो र सोभियत संघ कप जित्यो।
तर फेरि त्यो धेरै निर्णय गर्न एक आश्चर्य लाग्यो - जोडी मा जाने स्केटिङ आंकडा, अर्थात् - बरफ नृत्य मा। उनको स्वीकार मा, कि बिन्दु मा एक क्यारियर मा ठहराव आए। Elena Vodorezova - यो कुरा खेल Olympus नयाँ skater जित्यो छ। उच्च - उनको प्रदर्शन कार्यक्रम गर्न गाह्रो र प्रविधी गरिएको छ। "Surrendered, उहाँले एक कायता भएका थिए?" - Bestemyanova बारेमा Gossips कानेखुसी, तर एउटा मात्र त्यो कसरी हार्ड यसलाई यस्तो निर्णय लिन दुःखी थियो थाह छ। आखिर, जोडी मा जाने 17 वर्ष मा स्केटिङ आंकडा - यो पेसा को सुरुतिर akin छ, फेरि तल देखि हाइट्स आफ्नो बाटो बनाउन ...
"एक नम्बर छैन एन्ड्रयू थियो भने ..."
1977 देखि Natalya बरफ नृत्य मा Andreem Bukinym संग मिलेरको। तिनीहरूलाई आफु तातियाना Tarasova लिए तालिम। दुई ठूलो मतभेद - यो एक एकल कलाकार हुन र एक युगल मा प्रदर्शन गर्न बाहिर गरियो। Andrei Bukin पहिले नै खेल मा अनुभव थियो र नतालिया धेरै पाठ सिकाएको छ। लामो तिनीहरूले सँगै पीसने र बोल्ने कार्यक्रम महारत, कुनै एक गम्भीर यो जोडी मा भरोसा। समयमा Tatyana Tarasova त्यहाँ अन्य थप होनहार र पहिले नै लोकप्रिय वार्ड थिए।
तथापि, नतालिया Bestemyanova को प्रतिबद्धता र कठिन काम आफ्नो काम गरे। प्लस विश्वसनीयता र Andrey Bukin, साथै कठोरता र प्रतिभा तातियाना Tarasova को अनुभव विजय को स्तम्भ गर्न एक जोडी ल्याए। यो मान्छे को घरेलू मात्र, सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्न सुरु, तर पनि विदेश पुरस्कार पुरस्कार लिन।
खेल टिप्पणीकारहरू चमक र emotionality नतालिया गर्न आदर भुक्तानी गरेका छन्। यो अक्सर अग्रणी जोडी भनिन्छ। तर Bestemyanova यो categorically असहमत। "म त राम्रो छैन देख्यो थियो - त्यो भन्छन् -। एक नम्बर छैन एन्ड्रयू थियो, र अरू कसैले भने"
आफ्नो क्यारियर मा मुख्य चरण
यो, को पाठ्यक्रम, को ओलम्पिक। यी प्रतियोगिताहरु लागि, प्रत्येक खेलाडी लगभग आफ्नो सम्पूर्ण पेसा तयार छ। र यो मूल्य को ओलम्पिक मा "सुन" ले।
तर सबै पहिलो पटक काम गरेन। साराजेभो Bestemyanova Bukin मा 1984 मा र बरफ नृत्य मात्र दोस्रो भए, "चाँदी" प्राप्त भएको। तथापि, पहिले नै 1988 मा कैलगरी मा खेल मा स्पष्ट संकेत संग यात्रा एक जोडी - एक नेता बन्न। नृत्य जीत तातियाना Tarasova बारम्बार त्यसपछि कसरी प्रेम, तपाईं एक तर दुई टाउको प्रतियोगिहरु भन्दा हुन छ।
स्वीकार Bestemianova रूपमा, अर्थात् ओलम्पिक खेल सधैं उनको लागि तनावपूर्ण रहेको छ। त्यो लगभग प्रदर्शन तत्व को एक, कैलगरी मा लामो कार्यक्रम गरे। स्थिति एक खेलाडी भेट्टाउने समय थियो जो Bukin, सुरक्षित गरिएको थियो। खुसीको कुरा, रेफरी केहि याद भएन। छेउमा देखि यो कार्यक्रम यस भाग कि देखिन्थ्यो। र "सुन" एक जोडी मिल्यो छ।
आफ्नो स्थायी साझेदार संग Andrei Bukin Natalya प्रदर्शन र ओलम्पिक पछि जारी राखे। तिनीहरूले विश्व कप, बुडापेस्ट मा आयोजित जित्यो। एक कोच बिना प्रतिस्पर्धा गर्न यात्रा गर्दा। तातियाना Tarasova अस्पताल मा Bestemianova पनि प्रतियोगिता मा भाग लिन एक जोडी सल्लाह छैन अनुसार, सामान्य थियो, र। त्यसपछि यो skaters पहिले नै आफ्नो क्यारियर मा शीर्ष पुरस्कार लिएको छ, र उहाँले योग्य उत्तराधिकारियों तयार छ देखिन्थ्यो। तर च्याम्पियन जोडी यो र ओलम्पिक पछि पोडियम उच्च चरण पकड गर्न सक्ने अझै साबित भयो।
कार्यालय रोमान्स थियो कि?
रातो, आगोको केटी र सुन्दर अग्लो साझेदार ... दर्शक विश्वस्त थियो Bukin र Bestemyanovoy रोमन। साथै, तिनीहरूले बरफ मा प्रदर्शन मा भावुक प्रेमीहरूको भूमिका सुन्दर खेल्न सक्षम थिए। अहिलेसम्म यो मात्र अनुमान छ। Andrei Bukin पहिले नै नतालिया संग बैठक को समयमा विवाह भएको थियो। पत्नी अक्सर उनको प्रशिक्षण भ्रमण गर्नुभएको थियो। तर डाह लागि Bukin कारण दिइएको छैन। र नतालिया Bestemyanova एक विवाहित ... इगोर Bobrin प्रेम गोप्य र निराशा थियो। व्यक्तिगत जानकारी हुनत उनि अझै भयो थिएनन्। Bestemyanova मात्र आफ्नो प्रदर्शन देखेको र सहयोगिहरु बाट यसको बारेमा सुने।
"अनि म विवाहित प्रेम"
Razluchnitsa नै नतालिया Bestemyanova त लाग्छ छैन। उनको स्वीकार, एक मानिस परिवार छोडेर भने, त्यसपछि त्यहाँ सबै ठीक छ। र नतालिया इगोर फिर्ता गर्न कुनै उद्देश्य थियो। त्यो बाहिर बाट यो प्रशंसा, तर convergence तिर चरण लिएको छैन। र धेरै भाग्य हस्तक्षेप - Bobrina Bestemyanova र बरफ शो मा अन्तिम प्रस्तुति को एक जोडी मा 1980 मा राखे। तथापि, मात्र केही महिना प्रेमीहरूको डेटिङ सुरु भयो। र इगोर Leningrad बस्थे र Bestemyanova - मास्को मा। तर दूरी सजिलै हटाउन थियो। इगोर Bobrin शाब्दिक आफ्नो पत्नी र जवान छोरा मैक्सिम छोडेर नतालिया प्रेम प्रेरित साप्ताहअन्त, लागि उड्यो।
त्यसपछि समस्या सुरु भयो। तातियाना Tarasova पत्नी Bobrina संग न्यानो सम्बन्ध थियो, त्यसैले यस्तो व्यभिचार यसलाई निन्दा गर्नुभयो। खुसीको कुरा, व्यावसायिकता प्रबल। प्रशिक्षण मा एक प्रेम त्रिकोण को विषय उठ्नेछ थिएन, तर वातावरण लामो समय को लागि काल रह्यो।
विवाह मात्र 1983 मा भयो। नतालिया त्यो एउटा प्रस्ताव गरेको छ भन्दै, हाँस्नुहुन्छ। बस जस्तो, आफूलाई लागि अप्रत्याशित रूपमा पनि, किनभने केही मुस्ताङको स्याउको भाउ छोईसक्नु को Bobrin एक भ्कगडा अचानक बाहिर blurted पछि: "गरेको विवाह गरौं?"।
जोडीलाई विवाह गर्न आफ्नो निर्णय पेरिस बताए। अब तिनीहरूले समय समयमा जहाँ इगोर को घन्टी नैनाले प्रस्तुत छ नै रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्न फ्रान्सेली राजधानी आइपुग्दा।
खैर, अझै तातियाना Tarasova, आफ्नो विवाह मा साक्षी यस्तो संघ गर्न resigned।
नतालिया Bestemyanova: मेरो सपना मा बच्चाहरु
दुर्भाग्यवश, यो सपना सपना रह्यो। प्रसिद्ध जोडी जब पत्रकार सामना यो मुद्दा उठाउनु गर्न चाहनुहुन्छ थिएन। अफवाह नतालिया स्वास्थ्य कारण छोराछोरीलाई हुन सक्दैन भन्ने यो छ। तर, उनको पति, इगोर आफ्नो पहिलो विवाह मैक्सिम देखि एक छोरा छन्। र उसलाई Bestemyanova न्यानो र अनुकूल सम्बन्ध बनाए। तुरुन्तै Maksim नतालिया पहिचान छैन। मात्र किशोरावस्था मा, त्यो आफ्नो पिता को नयाँ चुनिएको एक सञ्चार पहिलो चरण लिए। आज मैक्सिम अक्सर तारकीय परिवारको अतिथि छ।
सामान्यतया नतालिया शान्त परिवार सांझ प्रेम गर्नुहुन्छ। तथापि, तिनीहरूले infrequently जारी छन्। Chet Bobrinev निरन्तर विदेशी यात्राहरु, पर्यटन वा बस काममा नष्ट दिनको लागि यात्रा। तर रूपमा नतालिया द्वारा मान्यता प्राप्त भएको sweeter को homecoming।
सौहार्द र विश्राम क्षेत्र
नतालिया Bestemyanova घर - यो एक देश घर, तारा जोडी को आवश्यकताहरु लागि डिजाइन गरिएको छ जो छ। व्यक्तित्व, एक टिप्पणी पनि छ। त्यसैले, नतालिया पिता को चिनाई चिम्नी संलग्न थियो। परिवार साथी र कलाकार Natella Abdullayeva को मकान को पर्खालहरु को सजावट आफ्नो रचनात्मक विचार महसुस गर्न।
सीधा पाइन रूखहरू, Oaks, एफआइआर संग घर को Windows मुनि। यो जंगल ताजा हावा ठूलो स्फूर्ति छ। त्यहाँ पनि एक शानदार फूल बेड छ। Bestemyanova निश्चित घर को छत र यस्तो सौन्दर्य को चिन्तन मा मिनेट को एक जोडी, र तपाईं अब सकारात्मक ऊर्जा संग चार्ज छन्।
तर घर हेरविचार लागि - troublesome, नतालिया बिलौना। यसबाहेक, त्यो आफूलाई सबै भन्दा राम्रो पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री हुन विचार गरेनन्। हो, साँच्चै त्यहाँ कुरा गर्न भनेर, इगोर, यसको दृश्य, पनि उनको भन्दा धेरै राम्रो तयारी। आगो मा विशेष गरी राम्रो मासु। वर्ष को एक जोडी पहिले Bobrin एशियाली तिल को बीउ ल्याए। उहाँले लगाए र अहिले अतिथि आश्चर्य एक अद्भुत पकवान - तिल मा र्याप ग्रिल मा तला मासु chunks छोड्छ।
भविष्यको लागि योजना
त्यस्तो एक रोचक र असाधारण व्यक्तित्व नतालिया Bestemyanova छ छ। जीवनी सधैं ऊर्जा र आशावाद अगाडी देख भरिएको छ रूपमा उनको धेरै घटनापूर्ण। अहिलेसम्म हुन त धेरै। यसको आज मुख्य काम - यो परियोजना इगोर "बरफ लघु को थिएटर" मा भाग हो। पनि लामो advocated Andrei Bukin त्यहाँ। थिएटर संसारभरि केही 20 देशहरूमा toured छ।
Natalya लेखकले गरेको मामला मा उनको हात खोजे। Bukin र Bobrin संग सहयोग मा त्यो पुस्तक जारी "जोडी, तिनीहरूलाई तीन जसमा।" सामान्य मा, तीन skaters एक जीवनी र भित्र मा दुनिया च्याम्पियनशिप को आफ्नो दृश्य।
र, को पाठ्यक्रम, नतालिया Bestemyanova कोचिंग लागि प्रतीक्षा गर्दै। यो कहीं बिना। त्यसैले, रिटायर यो वर्ष आउन लागि चाहनुहुन्छ छैन।
साइकल उचित रोपण। एक वयस्क एउटा बाइक कसरी चयन गर्ने? कसरी बाइक मा बस्न
आंकडा स्केटिङ मा कूदता के हुन्
Svetlana Tsarukaeva: स्पोर्ट उपलब्धिहरू र जीवनी
Valeriy Borzov: जीवनी, फोटो, व्यक्तिगत जीवन
Stretching: घरमा सुतली मा तल बसिरहेका
तालिका: पट्टी मा निकाल्दै। प्रशिक्षण कार्यक्रम
कर्लिंग-गाजर - आफ्नो बाल लागि सही उपकरण
के पूर्व सपना केटी? हामी सिक्न!
जंगली पश्चिम को फैशन सम्पदा। महिला-चरवाहे प्रवृत्ति
सम्भव अनुकूलता गर्ने Ruslan? रुस्लान रुस्लान र - तिनीहरूले के हुन् र तिनीहरूले के आनन्द लागि आवश्यक?
सबै अवसरमा लागि बीमा कम्पनी को दिन मा बधाई
हेनरी Matisse: चित्रकला र रचनात्मकता
तीन स्तर मा शब्द "स्वतन्त्रता" गर्न विलोम
समारा, रेस्टुरेन्ट "Skryabin" ठेगाना, भित्री, मेनु
Eyebrows लागि पेंट्स: समीक्षा। eyebrows लागि डाई: कसरी चयन गर्न
सार "Chelkash" Maksima Gorkogo